मलाई पैसा होईन, किड्नी चाहिएको हो भन्दै धरधरि रोईन चम्सुरी! – List Khabar
Home / समाचार / मलाई पैसा होईन, किड्नी चाहिएको हो भन्दै धरधरि रोईन चम्सुरी!
admin October 10, 2021 समाचार Leaveacomment 55 Views
हास्य टेलिश्रृखंला ‘मेरी बास्सै’ की चम्सुरी अर्थात कलाकार पल्पसा डंगोल अस्पताल भर्ना भएकी छन् । मि’र्गौला सम्बन्धी स’मस्याका कारण उनी केही दिन अगाडि महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ अस्पतालमा भर्ना भएको कलाकार दीपाश्री निरौलाले जानकारी दिइन् ।
उनमा केही अगाडि मिर्गौला सम्बन्धि समस्यामा देखिएको थियो । सो समस्याका कारण उनी एक महिना अस्पताल भर्ना भएर केही दिन अगाडि मात्र घर फर्किएकी थिइन् । तर घर फर्के लगत्तै स्वास्थ्यमा फेरि सम’स्या देखिएकोले उनलाई पुनः अस्पताल भर्ना गरि एको हो।
कलाकार दीपाश्रीका अनुसार उनले मिर्गौला समस्याका कारण केही समयदेखि डायोलोसिस गर्दै आएकी थिइन् । अहिले भने डायोलोसिस गर्न समेत समस्या परेकोले डाक्टरले उनको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बताएका छन् । हास्य टेलिश्रृखंला ‘मेरी बास्सै’ की चम्सुरी अर्थात कलाकार पल्पसा डंगोल अस्पताल भर्ना भएकी छन् ।
मि’र्गौला सम्बन्धी स’मस्याका कारण उनी केही दिन अगाडि महाराजगञ्ज स्थित टिचिङ अस्पतालमा भर्ना भएको कलाकार दीपाश्री निरौलाले जानकारी दिइन् । उनमा केही अगाडि मिर्गौला सम्बन्धि समस्यामा देखिएको थियो । सो समस्याका कारण उनी एक महिना अस्पताल भर्ना भएर केही दिन अगाडि मात्र घर फर्किएकी थिइन् ।
तर घर फर्के लगत्तै स्वास्थ्यमा फेरि सम’स्या देखिएकोले उनलाई पुनः अस्पताल भर्ना गरि एको हो। कलाकार दीपाश्रीका अनुसार उनले मिर्गौला समस्याका कारण केही समयदेखि डायोलोसिस गर्दै आएकी थिइन् । अहिले भने डायोलोसिस गर्न समेत समस्या परेकोले डाक्टरले उनको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बताएका छन्
Previous पक्राउ गर्न प्रह’री आएपछि रुखमा चढे आ’रोपी, प्र’हरी ३ दिनसम्म रुखमुनि कुरेर बस्यो
Next दीपाश्रीलाई मामाले दसैंमा थोरै पैसा दिएपछि फालेर हिँडिन्, बहिनीको लुगा चोरेर लगाइन्